Yakanakisa Micronized Palmitoylethanolamide poda Mugadziri
Cofttek ndiyo yakanakisa Palmitoylethanolamide (PEA) inogadzira hupfu muChina. Fekitori yedu ine yakakwana yekugadzira manejimendi system (ISO9001 & ISO14001), iine pamwedzi yekugadzira inokwana 3200kg.
Palmitoylethanolamide poda vhidhiyo
Palmitoylethanolamide (PEA) hupfu Specifications
Purity 98% Micronized PEA ； 98% poda
Molecular Kurema: 299.49 g / mol
Melt Point: 93 kusvika 98 ° C
Kemikari zita: Hydroxyethylpalmitamide Palmidrol N-Palmitoylethanolamine Palmitylethanolamide
Hafu Hupenyu: 8 maawa
Application: Palmitoylethanolamide (PEA) ndezve endocannabinoid mhuri, boka remafuta acid amides. PEA yakaratidzwa kuve ine analgesic uye yekudzivirira-kuita basa uye yakashandiswa mune dzinoverengeka kudzidziswa zvidzidzo zvakanangana nekutarisira kwekusingaperi kurwadziwa pakati pevarwere vakura vane zvakasiyana zvinokonzerwa nekiriniki mamiriro.
Palmitoylethanolamide ndeye endogenic fatty acid amide inowira pasi pekirasi yeNuclear Factor Agonists. Izvo zvinowanzoitika muzvikafu senge soybean, lecithin nzungu, uye nemuviri wemunhu.
Palmitoylethanolamide yakatanga kuwanikwa mukutanga kwema1940. Masayendisiti akatanga kuwana kuti kudyiwa kweupfu yezai yolk kwakasimudzira hutano hwekuzvidzivirira muvana uye kwakadzora njodzi yekuva nerheumatic fever. Kumwe kutsvagurudza kwakapedzisa kuti mazai emazai aive nekomboni yakasarudzika kureva, PEA. PEA yakawanikwawo muzvikafu zvese zvakaita nzungu uye soya, izvo zvinobatsira kupa hutachiona hwakasimba uye hutano hunobatsira.
Kunze kwekuwanikwa mune zvimwe zvekudya, PEA iri kuitikawo mumuviri wedu zvakasikwa. Iyo kemikari inogadzirwa mumuviri wedu nemazhinji maseru edu sechikamu chehutano hwakanaka hwemuviri. PEA inonyanya kugadzirwa nemuviri wedu mukupindura kuzvimba. Inozivikanwa kugadzirisa marwadzo edu mumuviri nekudzivirira immune system yedu kubva mukunyanyisa uye inokurudzira hutano hwakanaka hwekuzvidzivirira uye hwekutapira mumuviri.
Palmitoylethanolamide powder inonyanya kushandiswa semushonga wekurwadziwa, fibromyalgia, neuropathic pain, multiple sclerosis, carpal tunnel syndrome, uye mamwe akawanda mamiriro.
Palmitoylethanolamide uye iyo Cannabinoid Mhuri
Palmitoylethanolamide hazvireve kuti zvinobva ku cannabis asi zvinogona kutorwa sechikamu chemhuri ye cannabinoid. PEA inoshanda nenzira yakafanana neiyo CBD (cannabidiol), inova imwe yemakomputa makuru mu cannabis asi haina maitiro epfungwa. Zvigadzirwa zveCDD zvinozivikanwa kwazvo mazuva ano uye zviripo mune zvese zvinhu kubva kumafuta kusvika kumafuta, uye zvigadzirwa zvekudya. Zvigadzirwa zveCDD zvinoshandiswawo kune zvakawanda zvinogona kuve nehutano, kusanganisira wepfungwa, huta, uye hutano hwakabatana.
PEA iri zvakare cannabinoid, asi inoongororwa se endocannabinoid sezvainoitwa mukati memuviri. Zvisinei, zvakasiyana ne cannabidiol uye tetrahydrocannabinol sezvo muviri usingaite mishonga iyi.
Palmitoylethanolamide inokonzeresa kupisa-mafuta, simba-rinowedzera, uye anti-kupisa PPAR alpha. Kana aya mapuroteni akakosha akamiswa, PEA inomisa kuita kwemajini anokwanisa kusimudzira kuzvimba uye anoderedza kugadzirwa kwezvinhu zvinoverengeka zvinokanganisa. PEA inoderedzawo chiitiko cheiyo geni FAAH iyo inoputsa zvakasikwa cannabinoid anandamide uye inowedzera iwo mazinga eanandamide mumuviri. Anandamide inokonzeresa kudzikisira marwadzo ako, kudzikamisa pfungwa dzako, nekusimudzira kutandara mumuviri wako.
PEA inozivikanwa zvakare kusunga kumasero emuviri uye kuderedza marwadzo uye kuzvimba. Iine palmitic acid mune ayo mamiriro, ayo anobatsira muviri kugadzira Palmitoylethanolamide mumuviri.
Sekureva kwemamwe masayendisiti, kungo wedzera kudya kwako kwemuchindwe asidi hakuzokanganisa kugadzirwa kwePEA. Izvi zvinodaro nekuti muviri wako unongoshandisa PEA mumuviri wako chete kana ichida kupora kuzvimba kwako kana kurwadziwa. Izvi zvinoguma muzvikamu zvePEA mumuviri zvinowanzosiyana zuva rese.
Nzira yakanakisa yekuwana mabhenefiti ePEA ndezvekudya izvo PEA-zvakapfuma zvekudya kana zvakaenzana zvekuwedzera.
Palmitoylethanolamide powder makomborero uye maitiro
PEA yakaratidzirwa kuve nekurwadziwa-kurerutsa uye kupesana nekuzvimba-zvivakwa uye yakashandiswa kune manejimendi ekurwadziwa kusingaperi pakati pevakuru vane akawanda ari pasi pemakiriniki mamiriro. Semuenzaniso, inogona kupa chinobatsira senge chinobatsira pakurapa marwadzo ekudzokera kumashure muvarwere vakura kana inogona kushandiswa yoga pakurapa kusingaperi kwekurwadziwa mune varwere vanorwara zvakanyanya panzvimbo yechinyakare analgesics iyo ine njodzi huru yemhedzisiro.
Mhedzisiro inovimbisa yakaratidzirwa pakurapa kweasina-ekuvhiya radiculopathies ine Ultra-micronized kuumbwa kwe PEA uye iyo yekubatanidza kurapa nealpha-lipoic acid yekudzora isingaperi prostatitis / chisingaperi pelvic pain syndrome.
Pazasi pane mamwe mabhenefiti akakura ePea:
Pane humwe humbowo hunogonesa kugona kwePEA yekudzora kurwadziwa kwakanyanya. PEA yakaferefetwa muvanhu vanopfuura zviuru zvitanhatu uye makumi matatu emakiriniki miedzo kubvira kuma6. Zvisinei, chidzidzo chacho kazhinji chakakundikana kusiyanisa pakati pehutano hwehutachiona uye husina-neuropathic. Iyo zvakanakira Palmitoylethanolamide yemarwadzo europathiki haanyatso kujeka nekuda kwekushomeka kweruzivo kusvika nhasi.
Kumwe kudzvinyirirwa kwaive kwekuti mazhinji ezvidzidzo izvi aishaya kudzora kwenzvimbo uye kutsvagisa kwemhando yepamusoro kunodiwa kuti usarudze kushanda kwePEA mukubvisa marudzi akasiyana ekurwadziwa.
Mune ongororo yezvidzidzo gumi nemaviri zvevanhu, PEA zvinowedzera zvakaratidza kushanda mukuderedza kweanogara uye neuropathic marwadzo potency pasina zvakakomba mhedzisiro. Ivo vanhu gumi nevaviri vaiwanzopihwa PEA zvinowedzerwa nemadosi pakati pe12 kusvika 12 mg / zuva kweanopfuura 200 kusvika mavhiki masere. Iyo yekuwedzera yakatora angangoita mavhiki maviri kuti ibudirire yekurwadziwa-kusunungura nyika. Kuitora chero kwenguva yakareba yakasimudzira mhedzisiro yayo pasina kukonzera chero yakaipa mhedzisiro.
Chimwe chidzidzo chakaitwa ne300 kana 600 mg / zuva rePEA chakaratidza kudzikiswa kwakasimba mukurwadziwa kwe sciatica mukutongwa kwakakosha kwevanhu vanopfuura mazana matanhatu. PEA yakadzora kurwadziwa nekupfuura 600% mumavhiki matatu chete, izvo zvisingawanzo kuitika nevazhinji vanonyaradza marwadzo.
· Hutano hwehuropi uye kumutsiridzwa
PEA yave ichizivikanwawo kunge inobatsira kune neurodegenerative hosha uye sitiroko. Iyo yekuwedzera inoonekwa yekuvandudza huropi mashandiro nekubatsira maseru ehuropi kurarama uye kudzikisa kuzvimba.
Mukudzidza kwevarwere mazana maviri nemakumi mashanu ekurohwa nesitiroko, kuumbwa kwePAA ne luteolin kwakaratidza zviratidzo zvekunatsiridzwa kupora. Izvo zvakare zvinoshevedzwa kuva zvine pundutso pundutso hutano hwakanaka, hunyanzvi hwekuziva, uye mashandiro ezuva nezuva ehuropi. Mhedzisiro yacho yaionekwa mushure memazuva makumi matatu ekuwedzera uye kana kwapera mwedzi miviri yekuwedzera, kumwe kuvandudzwa kwakaonekwa.
Ose ane luteolin uye ari ega, PEA yakaonekwa ichidzivirira chirwere cheParkinson mumakonzo kana chishandiswa ne luteolin. Iyo inoderedza kukanganisa muuropi nekudzivirira iyo dopamine neurons. Zvisinei, zviyero zvemakiriniki zvakajairika zvinodiwa kuti zvionekwe izvi zvakawanikwa.
Chimwe chidzidzo chakaratidza kuti PEA ine luteolin yakabatsira kusimudzira maurotrophic zvinhu zvakaita seBDNF & NGF ayo ari mapuroteni madiki ane simba anobatsira kugadzira maseru matsva ehuropi. Yakawedzera kugona kwehuropi kumutsiridza matsva maseru uye zvinyama mushure mekushungurudzika kwemutsipa wepelinha kana huropi. Kana PEA pamwe ne luteolin yaishandiswa mumakonzo zvakawedzera kupora kwemitsipa mumakonzo nekukuvara kwemuzongoza.
Nekuda kwekuitika kwechisikigo kwe cannabinoids mu PEA, mhedzisiro yakaratidza kuwedzera muhunhu hwevarwere, manzwiro. Yakaratidza kudzikira kwekutora njodzi mumakonzo. Nekudaro, mhedzisiro yaro yekubatwa ichiri kuferefetwa muvanhu uye zvimwe zvidzidzo zvinodiwa kuti zviongorore izvi.
· Migumisiro pamwoyo
Kurwadziwa kwemoyo kunoitika nekuda kwekuvharika kwemitsipa yeropa yakanangisa kumoyo. PEA inozivikanwa kuti itorezve kukuvara kwemasuru emoyo uye kuwedzera kuyerera kweropa kuenda pamoyo iyo inobatsira kudzikisira zviitiko zvekurwadziwa kwemoyo. Chidzidzo mumakonzo chakaratidzawo kudzikiswa kweanopisa cytokine mazinga mumoyo.
Iko kushandiswa kwePEA zvakare kwakadzora huwandu hweropa rakakwira mumakonzo uye kwakadzivirira kukuvara kweitsvo nekudzora zvinhu zvinopisa. Nekuderedza iyo midziyo yeropa, PEA yaive inoshanda kuvharidzira ma enzymes uye ma receptors anowedzera kuwedzera kweropa.
· Zviratidzo zvekusuwa
Mune ongororo ichangoburwa, vanhu makumi mashanu nevasere vanotambura nekushushikana vakabatwa nePEA. Masero e58 gm pazuva akapiwa kuvarwere kweanopfuura mavhiki matanhatu. Izvi zvakakonzera kukurumidza kukurumidza kwemanzwiro uye zvizere zviratidzo. PEA painowedzerwa kumushonga unodzvinyirira kureva, citalopram, yakadzikisa zviratidzo zvekushushikana neyakajairwa 1.2%.
· Zviratidzo zvechando chakajairika
Chimwe chidzidzo chakaratidza PEA semushonga unoshanda wekurwisa hutachiona hwefuruwenza hunokonzera kutonhora. Mune kumwe kuongorora kwekutanga kweanopfuura zviuru zvina zvevanhu, PEA yakakwanisa kuratidzira zvakanaka kusagadzikana uye yakabatsira kudzikisa furu-kunge zviratidzo kune varwere.
Mune kumwe kuongorora, mazana masere evarwi akapihwa anenge 900 mg ePAA iyo yakadzora iyo nguva yechando uye yakaporeswa zviratidzo senge huro, runny mhuno, fivhiri, uye kutemwa nemusoro.
· Gut kuzvimba
Chekupedzisira asi chisiri chidiki PEA yakashandiswa zvinobudirira kumutsidzira zviratidzo zvehutachiona hwechirwere (IBS) mumhuka. PEA zvinowedzerwa kana zvayedzwa mumakonzo ane chisingaperi gut kuzvimba, zvakabatsira kugadzirisa ura kufamba uye zvakadzivirira kudzivirira kukuvara kune gut gutera.
Iyo gut kukuvara kana kuzvimba kunokonzerwa ne ulcerative colitis iyo inogona kutungamira kune njodzi yekenza. Iko kushandiswa kwePEA kwakamisa zvakajairika maturu maturu kubva mukusimudzira kenza inowedzera mumakonzo. PEA inoderedza iyo inoputira cytokines uye kukura kweiyo neutrophils uye immune maseru ayo anowedzera zviratidzo zvekukuvara kwegumbu.
Palmitoylethanolamide manyuko ezvekudya
Kunyangwe PEA iri yakazara mafuta asidi, kusanganisira mamwe mafuta akazara mukudya kwako anokuvadza kupfuura kunaka. Kudya chikafu chakakwira mumafuta akazara hakuzowedzere kugadzirwa kwemuviri wako wePAA pachinzvimbo kuchawedzera njodzi yako yekukudziridza akasiyana siyana asingagumi uye ekuputira hosha.
Chikafu senge zvigadzirwa zve soy, soy lecithin, nzungu, uye alfalfa zvimwe zviwanikwa zvikuru zveBEA. Vanhu vane nhege allergies vanofanirwa kusvetuka nzungu uye kudya zvimwe zvekudya. Zai yolk imwe sosi yakanaka uye inogona kudyiwa nevanhu vasina hunyanzvi nemazai. Vatengi vanogona zvakare kufunga nezve kutora PEA zvinowedzera sezvo iri yakachengeteka uye inoshanda sarudzo.
PEA inowedzera muyero & chengetedzo
Zvinoenderana nezvidzidzo zvekiriniki, angangoita mazana matanhatu emamiriyoni / zuva angangodikanwa kudzikamisa marwadzo etsinga, uye madosi e600 g / zuva anogona kushandiswa kurapa chirwere cheshuga chetsinga.
Kune varwere vane chirwere cheshuga vane matambudziko eziso, madosi anosvika ku1.8 g / zuva aishanda pakuderedza kukuvara kwemitsipa yeziso.
Nekurapa kweiyo yakajairwa kutonhora, 1.2 g / zuva rePEA yaive muyero muyero.
Taura nachiremba wako usati watora zvinowedzera zvePEA sezvo PEA isina kubvumidzwa neDFA kuti itore madhizaini makuru.
Kudya Palmitoylethanolamide poda kana zvinowedzerwa mune zvidiki, mashoma madosi anowanzoonekwa akachengeteka. Nekudaro, zvimwe zvemberi zvekiriniki zvidzidzo zvinotarisirwa kune yakakwira madosi. Yenguva-refu PEA yekuwedzera inozivikanwawo kuve yakachengeteka zvinoenderana nezvimwe zvidiki-zvidzidzo.
Vamwe vagadziri vanobva kufekitori inogadzira PEA vanokurudzira kupatsanura iyo yakazara dhizaini muzvikamu zviviri uye kuidya masikati. Mune zvimwe zviitiko, PEA ine micronized, iyo mumazwi akapusa yakanaka palmitoylethanolamide powder, inozivikanwa kunge iri nani kupinda mumuviri uye masayendisiti anoona iyo fomu yehupfu kunge iri nani pane mamwe mafomu.
Kunwa kwemumuromo kwe palmitoylethanolamide inowanzoonekwa yakachengeteka kune vakawanda vakuru kana ichishandiswa kwemwedzi mitatu. Parizvino, hapana zvinetso zvakakomba kana kudyidzana kwezvinodhaka-kune-zvinodhaka zvakaonekwa. Zvisinei, hapana ruzivo rwakakwana rwekuti mushonga unogona kuchengetedzeka kana ukashandiswa kwenguva yakareba kupfuura mwedzi mitatu. Mhedzisiro inogona kusanganisira kushungurudzika mudumbu, izvo zvisingawanzoitika.
Kuti zvive pachena, PEA haina kukonzera chero matambudziko akakomba mune chero eongororo dziri pamusoro asi ichiri kushaya kwakakodzera chengetedzo zvidzidzo. Zvakare, pane humbowo husina kukwana hwekuona huwandu hwekubudirira kwePEA kune varwere vane marudzi aya ekurwadziwa.
Mimba uye vana
PEA inowanzoonekwa yakachengeteka pakushandiswa kwevakuru uye zvidzidzo zvakati wandei zvakaratidza zvishoma kune zvisina njodzi muvana. Asi zvidzidzo zvakakura zvinoda kuongorora kuchengetedzwa kwePEA muvana. Nekuda kwekushomeka kwemakiriniki akakwana, vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa vanokurudzirwa kuti vatevere yambiro uye vobvunza chiremba vasati vatora chero PEA zvinowedzera.
PEA yakaderedza akati wandei mhedzisiro uye marwadzo apo ichivandudza hupenyu hwehupenyu. Zvidzidzo zvaro zvinotsigira kuchengetedzeka uye kugona kwemafuta acid uye zvinokurudzirwa zvakachengeteka mukushandiswa kwechipatara kwePEA. Iyo yekuwedzera inonyanya kushanda pakudzvinyirira syndromes inosanganisira carpal tunnel syndrome uye kurwadziwa kwesimba. PEA yekuwedzera iri zvakare nyore kutora uye inogona kupihwa nemuromo.
Yeuka kubvunza nachiremba usati watora chero PEA zvinowedzera seyakanyanya madhaidhi ePEA anogona kutungamira kune mamwe matambudziko. Kunyangwe hazvo matambudziko ari akanyorova uye asiri akakomba, PEA haifanirwe kushandiswa seinotsiva marapirwo anotenderwa ekurapa. Nekudaro, izvo zvakatsanangurwa-pamusoro zvakanakira uye zvidzidzo zvakaitwa zvakanyanya mumhuka nemaseru. Iyo yakagadzikana kiriniki humbowo ichiri kushayikwa.
Zvimwe zvidzidzo muvanhu zvinoda kuti uone mhedzisiro yePEA pane hutano hutano, moyo, uye histamine kuburitswa.
Palmitoylethanolamide (PEA) poda yekutengesa & Kwaunga tenga Palmitoylethanolamide (PEA) poda yakawanda
Isu tiri nyanzvi Palmitoylethanolamide (PEA) poda mutengesi wemakore akati wandei, isu tinopa zvigadzirwa nemakwikwi emutengo, uye chigadzirwa chedu chemhando yepamusoro uye chinoedzwa chakasimba, chakazvimirira bvunzo kuyedza kuti ive yakachengeteka kuti ishandiswe pasi rese.
Hansen HS. Palmitoylethanolamide uye mamwe maamamide congeners. Basa rakarongwa muurwere huchirwara. Expur Neurol. 2010; 224 (1): 48-55
Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. N-Palmitoyl-ethanolamine: biochemistry nemikana mitsva yekurapa. Biochimie. 2010; 92 (6): 724–7
Cerrato S, Brazis P, della Valle MF, Miolo A, Puigdemont A. Mhedzisiro ye Palmitoylethanolamide pane immunologically induction histamine, PGD2 uye TNFα kusunungurwa kubva kune canine ganda mitezo masero. Vet Immunol Immunopathol. 2010; 133 (1): 9–15